Malagasy aho: Offre d'emploi
Ny Fanjakan’ny Lanitra dia mitady mpisolo vava maromaro.
- be fitiavana,
- mora fanahy,
- tia fahamarinana,
- manetry tena,
- tia namana,
- tsy tia tena,
- tsy mivavaka amin’ny vola,
- tsy tia ratsy.
Ireo izay liana dia iangaviana handefa ny antontan-taratasy momba azy ao amin’izao adiresy manaraka izao: Villa Paradisa, Jerosalema Vaovao.
Izay mila fanazavana fanampiny dia manatona ao amin’ny Matio 25:21.
Ny Afobe na ny Helo dia mitady mpisolo vava maromaro.
- mivavaka amin’ny vola,
- tia fifandirana sy ady,
- be fialonana,
- mpangalatra sy mpandroba,
- tsy tia fiadanana,
- tsy tia manao soa.
Ireo izay liana dia iangaviana handefa ny antontan-taratasy momba azy ao amin’izao adiresy manaraka izao: Farihy Mirehitra Afo, B.P 666.
Izay mila fanazavana fanampiny dia manatona ao amin’ny Apokalypsy 21:8.
Publié par Malagasy aho à 09:42